limited or no access to polling stations | Burma Election Tracker
limited or no access to polling stations Citizens in Chin State told not to vote (မဲထည့်ခွင့်မရခြင်း)
According to media reports, eight nineteen year-olds in Chin State who had ID were told not to vote.
အသက် ၁၉ နှစ်ပြည့်ပြီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိထားသူ ၈ ဦးကို မဲမထည့်ခိုင်းကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။
Citizen had no access or information to vote မဲပေးရမည်ကိုမသိခြင်း
A Karen citizen told Burma Election Tracker why they were unable to vote at all: "No one told me about how to vote. And no one came to take advanced votes, so I did not vote." | မည်သူမှလာရောက်ပြောကြားခြင်းမရှိသဖြင့်မဲပေးရမည်ကိုမသိပါ။ကြိုတင်မဲလဲလာရောက်ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
Citizen claims election unfair and cites abuse of advance votes | တရွာလုံးက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ကြိုတင်မဲထည့်လိုက်ရသည့် အတွက် ကျွန်မအနေဖြင့် မတရားကြောင်း ယူဆသည်။
During interview withaKaren state citizen, Burma Election Tracker was told: "The USDP asked the population and said they will come again to provide voting ballots but they didn't, so we had to vote in advance. Everyone was unhappy and not interested on this election. There were many security officers in the village.
Candidate for the election speaks of election fraud and lack of access to polling stations | မိမိသည် NGO အလုပ်အား(၁၆)နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်သလို၊မြို့ နယ်မိခင်နှင့်ခလေးစောင့်ရှောက်ရေးဥက္ကဖြစ်ပါသည်။မိမိငွေကြေးဖြင့်ဝင်ရောက်အရွေးခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Burma Election Tracker conducted the following interview withaCitizen from Rangoon division after the election, whereanumber of election issues such as fraud, access to polling stations and miscounting of votes were raised:
Polling station moved without voters being informed / ရွေးကောက်ပွဲရက် ဒီးမော့ဆိုမြို့မဲရုံအပြောင်းအရွေ့ Posted in Dimawhso
In Dimawhso Township, Red Karen State (Karenni State) the polling station was moved by the order of the Commission without informing the voters, saidavoter.
ကရင်နီပြည် ဒီးမော့ဆိုမြို့မှ အထကကျောင်းတွင် ချမှတ်ထားပေးသော မဲရုံအမှတ်(၁)အား မဲထည့်သည့် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆန္ဒမဲပေးသူတို့အား အကြောင်းကြားအသိပေးမှုများမရှိဘဲ မဲကော်မရှင်၏အမိန့်ဖြင့် မဲရုံပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆန္ဒမဲသွားပေးခဲ့သူတစ်ဦးကပြောသည်။
Source: Kantarawaddy Times
13 year old foced to vote for USDP, while other voters are refused access to vote in Mandalay |အသက်မပြည့်သူအား အတင်းမဲလိမ်ပေးခိုင်ခြင်းနှင့် မဲရုံပိတ်ချိန်မရောက်ခင်၊ မဲစာရင်းမရေတွက်ခင် USDPမှအနိုင်ရသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း။
Mandalay (unspecified division)
Mandalay (unspecified township)
An inside network in in Mandalay Division advised Burma Election Tracker thataWard Chairperson tooka13 year old person to the polling station and forced the child to vote for USDP. At 10:30 am in the morning, the Polling Station Commission announced that all the 3,000 eligible voters had cast their votes already and USDP hadalandslide victory. A voter went to the polling station at 3:00 pm in the afternoon to vote and was told that he had already voted. The voter explained that he had not castavote yet and would complain to the police. He was finally allowed to castavote.
Rangoon voter removed from election roll without explanation and denied access to vote
A Rangoon voter explained to Burma Election Tracker that he was prevented from casting his vote: "Eligible voter names from our house were collected but when I actually went to cast my vote, I was told that my name was not listed and I had to go home without voting. I got no explanation of why I was not in the list. " | တစ်အိမ်လုံးမှာရှိသည့် မဲပေးနိုင်တဲ့လူနာမည်စာရင်းတွေကြိုတင်ယူသွားခဲ့သော်လည်း၊ မဲသွားပေးသောအခါ မဲပေးသူစာရင်းတွင်မပါလို့ ပြောပြီးမဲပေးခွင့်မပြုခဲ့လို့ ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်လို့သေချာမရှင်းပြပါ။
Violation of election laws in Karenni State: Citizen returns from travel to find someone voted on their behalf ခရီးကပြန်လာပြီး မဲမပေးလိုက်ရပါဘူး အခြားသူတဦးက ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပြီး ဘယ်ပါတီကိုပေးလိုက်မှန်းမသိပါ။
There have been numerous reports of violations of election laws and officials casting votes on behalf of voters, without their knowledge or consent. A citizen in Karenni state told Burma Election tracker: "I returned after traveling and was not able to vote. I realized someone else had voted on my behalf and I don't know which party that person voted for. There will not be change. " ခရီးကပြန်လာပြီး မဲမပေးလိုက်ရပါဘူး အခြားသူတဦးက ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပြီး ဘယ်ပါတီကိုပေးလိုက်မှန်းမသိပါ။ ဘာမှလဲထူးခြားလာမည်ဟုမထင်ပါ။